Kitra – Mondial pupilles 2017 : hisolotena an’i Madagasikara ny Net Foot Mada | NewsMada
Kitra – Mondial pupilles 2017 : hisolotena an’i Madagasikara ny Net Foot Mada
Handeha hiatrika ny “Mondial pupilles” andiany faha-32“, taranja baolina kitra tanterahina any Frantsa, ny 25 – 29 may ho avy izao, ny klioban’ny Net Foot Mada. Marihina fa fifaninanana natokana ho an’ny sokajy U13 ity handraisan’ny Net Foot Mada, anjara ity. Tena avo lenta ny fihaonana ary fiadiana ny ho tompondaka eran-tany kely mihitsy izy ity satria hahatratra 72 ny isan’ny ekipa hifaninana amin’io, izay misandrahaka amin’ny vazan-tany efatra, araka ny fanazavan’i Rivo, tomponandraikitry ny ekipa, nihaona tamin’ny mpanao gazety, omaly, teny Tsimbazaza. Eo ambany fiahian’ny Fifa sy ny Uefa ary ny federasiona frantsay, ity “Mondial pupilles” ity.
Nomarihin’i Rivo hatrany fa tena ao anatin’ny fanomanana tanteraka ny ekipa ankehitriny izay mandray anjara amin’ny fifaninanana atao eny Itaosy, nanomboka ny asabotsy lasa teo. Io no hifantenana ireo mpilalao 16 handrafitra ny ekipan’ny Net Foot Mada. Ny telo kosa dia filohan’ny ekipa sy ny mpanazatra, izay hameno ny isan’ny ekipa ho 19.
Nambaran’i Rivo hatrany fa efa ela izy ireo no nanomantena ka efa nosantariny tamin’ny lalao natao nandritry ny fialan-tsasatry ny Frankofonia izany. “Tsy matahotra ary tapa-kevitra ny haka fandresena ireo mpilalaon’ny Net Foot Mada, na vao sambany aza no hivoaka any ivelany”, hoy hatrany i Rivo.
Marihina fa hotanterahina ny 3 marsa ho avy izao ny antsapaka hahalalana izay iray vondrona amin’ity “Mondial Pupilles 2017″ ity. Na eo aza ny fahavononan’ny ekipan’ny Net Foot Mada, miantso fanampiana sy tolo-tanana amin’ireo mpanohana sy olona tsara sitra-po tia fanatanjahantena, indrindra fa ny mpankafy baolina kitra izy ireo.